Wararka Maanta: Sabti, Dec 15, 2012-Iskahorimaad Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Xoogagga Al-shabaab ku dhexmaray Duleedka Degmada Garbahaareey
Diyaad Cabdi Kaliil oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee gobolka Gedo ayaa sheegay in dagaalku uu qarxay markii xoogag taabacsan Al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen degmada oo wafdi dowladda ka socda ay ku sugan yihiin.
"Xoogaggii Al-shabaab ee weerarka soo qaaday waan kala erinnay, waxaana kaga dilay dagaalka saddex ruux, shan kalena waan kaga dhaawacmay," ayuu sarkaalkan u sheegay warbaahinta, isagoo sheegay inaysan jirin khasaare dagaalkaas kasoo gaartay.
Al-shabaab ayaan iyadu weli ka hadlin dagaalka, laakiinse goobjoogayaal ku sugan deegaanka uu dagaalku ka dhacay ay sheegeen inay arkeen maydadka shan qof oo labadii dhinac ee uu dagaalku u dhexeeyay xaaladduna ay tahay mid deggen.
Ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin goobtii lagu dagaalamay, iyadoo dagaalkan aysan wax khasaare ah kasoo gaarin wafdigii dowladda ee tagay xarunta gobolka Gedo oo uu ka mid ahaa taliyaha ciidamada xoogga dalka, Jen. C/qaadir Sheekh Cali Diini.
"Wafdiga dowladda si nabadgalyo ah ayay ku joogaan degmada, waxayna wataan kulammadii ay halkan u yimaadeen, xaaladduna waa mid deggen," ayuu yiri Diyaad Cabdi Kaliil, isagoo sheegay in ciidamada dowladdu ay aad u feejigan yihiin.
Degmada Garbahaarey oo ah xarunta gobolka Gedo ayaa waxay ka mid tahay degmooyinka ay inta badan weeraraan xoogagga Al-shabaab, iyadoo dhowr jeer ay Al-shabaab gudaha u gashay degmadaas.